Shikhar Post » टान महासचिव पदका उम्मेदवार कर्मा शेर्पा को हुन् ?
टान महासचिव पदका उम्मेदवार कर्मा शेर्पा को हुन् ?
टान निर्वाचन २०१९ मा खुम बहादुर सुबेदी प्यानलबाट महासचिव पदका उम्मेदवार कर्मा शेर्पा सगरमाथाको जिल्ला सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर १, टाक्सिन्दुमा जन्मिनुभएको हो । मध्यम परिवारमा जन्मिएर कष्टपूर्ण संघर्षबाट आफुलाई सफल व्यवसायीको रुपमा उभ्याइसक्नुभएका शेर्पा बहुआयामिक ब्यक्तित्वका धनी हुन्हुन्छ ।
ब्यवस्थापन शंकायमा स्नातक उत्तिर्ण शेर्पाले नेपालको पदमार्ग पर्यटनको प्रचार प्रसारका लागि फ्रान्स, स्विटजरल्याण्ड, थाईल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा र जर्मनी लगायत दर्जनौ देशको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । पदयात्रा ब्यवशायमा अन्तरष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत लागु गर्ने क्रममा रहनु भएका शेर्पा नोम्याड नेपाल ट्रेक्स एण्ड एक्सिपिडिसनका प्रबन्ध निर्देशक हुनुुहुन्छ ।